Voarafitra valopy tontonana-Voarafitra valopy tontonana-Nanjing BeiLiDa Vaovao ny Fitaovana ny Rafi-Injeniera Co., Ltd.
Eto ianao : Home>Product>Tontonana vita amin'ny valopy
Model Number: Tontonana vita amin'ny valopy
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny teknolojia indostrialy maoderina, ny tranoben'ny trano dia azo atao anaty vata ary amin'ny seta toa ny famokarana milina. Raha mbola misy entana fanamboarana mialoha dia alefa any amin'ny toeram-panorenana ary mivory.
Nanomboka nanentana ny fahalianan'ny olona ny fiandohan'ny taonjato faha-20 ary ny tranobe vita vinavina dia nanomboka tamin'ny 1960 izy io. Ny Britain, France, ny Sovietika ary ireo firenena hafa dia nanao ny andrana voalohany. Noho ny haingam-pandeha haingam-pandeha haingana sy ny vidin'ny famokarana trano vita prefabricated dia miparitaka haingana eran'izao tontolo izao.
Ny endrik'ireo tranobe vita tamin'ny amboalohany dia somary henjana sy akanjo. Taty aoriana, dia nanatsara ny famolavolana ny olona, ​​nampitombo ny fahalefahana sy ny fahasamihafana, ka ny fanamboarana trano voaomana dia tsy ho vinavina amin'ny batika ihany, fa amin'ny fomba manankarena ihany koa.
I. Ny asa sy ny tombony azo amin'ny GRC fananganana ivelany fiarovana trano
Ny vokatra perifika GRC dia azo soloina amin'ny bobongolo, endrika, loko, soratra, sns.
1. Ny firafitry ny fiarovana periferiana dia: rindrina ivelany, tafo, varavarankely ivelany, varavarana ivelany, sns.
2. Ny firafitry ny peripheral dia ampiasaina amin'ny fampidirana ny haingon-trano ivelany sy ny fitehirizana ny hafanana mba hanoherana ny rivotra sy ny orana, ny fiovan'ny hafanana, ny tara-pahazavana amin'ny masoandro, sns.
3. Fampiasa: manana fananana amin'ny fikajiana ny hafanana, ny fitrandrahana hafanana, ny rano madio, ny porofo hamandoana, ny fanoherana ny afo, ny fahatokiana, ny fanadiovana ny tenany, sns.
4. Azo zaraina ho toy ny rafitry ny rindrina tokana sy ny rindrina fampidirana miaraka amin'ny multi-bay.
5. Azo zaraina ho rafitra mekanika tokana-sosona sy rafitry ny rafitra sosona maro-layer. Ny takelaka ivelany dia rakotra fiarovana, ny afovoany dia mampiasa fitaovana fitehirizana hafanana ho an'ny tenany, ary ny atiny anatiny dia sosona anatiny.
6. Ny takelaka tsirairay dia mampiasa satroka ho toy ny rafitra manohana na manamafy orina fiarovana amin'ny atiny ho toy ny rafitra manohana;
Ny fiasa lehibe sy ny tombotsoan'ny tranobe vita amin'ny GRC dia:
(1) Famolavolana toetra samihafa.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy ifandraisany amin'ny fangatahan'ny trano ny volavolan-trano, misy rindrina maro mitondra entana, habaka kely, fisarahana tsy maty, ary ny habaka ao amin'ny efitrano dia tsy azo zaraina tsara. Na izany aza, ny trano vita an-trano dia azo zaraina ho efitrano kely na efitrano malalaka na efitrano kely araka ny filàn'ny mponina. Ny iray amin'ireo olana fototra amin'ny efitrano lehibe mety mifanentana amin'ny tranobe fonenana dia ny fisian'ny rindrina fisarahana manamaivana. GRC, GRG, GRP ary fitaovana vaovao hafa no fitaovana tsara indrindra ho an'ny rindrina ivelany ivelany, rindrina fisarahana, fefy mihantona ary haingon-trano rindrina anatiny.
(2) Fanavaozana mandrindra
Ireo tranobe vita amin'ny PC-GRC dia manana ireto fiasa manaraka ireto:
1. Fiarovana ny tontolo iainana ary tsy misy fandotoana. Ny rindrina dia manana ny asan'ny fanadiovana sy ny fanadiovana ny rivotra.
2. Ny rindrina ivelany mpamonjy angovo dia manana takelaka famonoana hafanana mba hanamafisana ny hafanana amin'ny ririnina ary hampihena ny fanjifana angovo amin'ny fantsona amin'ny fahavaratra;
3. Ny fanodinana feo dia manatsara ny fiantsonan'ny rindrina sy varavarana ary varavarankely. Ny fitaovana famonoana mafana dia manana fihetseham-po tsara amin'ny fampidiran-dra, mba hanomezana toerana milamina ao an-trano sy hisorohana ny fitsabahan'ny feo ivelany.
4. Ny fisorohana ny afo sy ny afo misintona mba hisorohana ny fiparitahan'ny afo;
5. Ny fihenan'ny aisma amin'ny lanjan'ny fananganana sy ny fitomboan'ny fifandraisana mora vita;
6. Ny bika tsara tarehy dia tsy mitaky haitraitra, fa ny tarehy no mazava sy mampiavaka azy, ary tsy hikorontana, tsy hihena na hihena taorian'ny fampiasana maharitra.
7. Ny fivoarana tsara dia manome toe-javatra tsara amin'ny lakozia sy ny trano fidiovana mba hisy fitaovana fanadiovana isan-karazany;
8. Fanitarana tsara mba hampitomboana ny mety hamoronana fitaovana elektrika vaovao, fitaovam-pifandraisana, fitaovana famokarana angovo, sns.
(3) orinasa mpanamboatra
Tena sarotra ho an'ny ivelany ivelany ny tranobe nentim-paharazana hamorona modely tsara tarehy arakaraka ny fananganana tranokala, ary ny loko hoso-doko hoso-doko dia tsy haneho ny fahasamihafana loko ary tsy hirehitra mandritra ny fotoana maharitra. Na izany aza, ny tontolon'ny rindrina vita amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina GRC dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny bobongolo, famonosana mekanika, nanoteknôlôjia, teknolojia lozisialy sy teknolojia hafa. Ny fitaovana insulation be dia be dia soloina fitaovana fampidirana insulation PC-GRC; Valan-jiro vita amin'ny vy, fanamainam-by maivana, mpanantona metaly isan-karazany ary mpandray an-tanana dia famokarana milina rehetra misy refy mety. Ny takelaka gorodona sy tafo koa dia namboarina mialoha amin'ny orinasa ho fanamorana ny fananganana. Ny akora anatiny toy ny biraon'ny gypsum, ny fanakonana ny gorodona, ny hazo fisaka hazo ary ny toy izany dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny tsipika famokarana sarotra. Ankoatr'izay, amin'ny fizotran'ny famokarana orinasa, dia azo fehezina amin'ny fotoana rehetra ny fanondroana ny fampiasa amin'ny fitaovana toy ny tanjaka, ny fanoherana ny afo, ny fanoherana ny setroka, ny hamandoana ny rivotra, ny fitrandrahana feo ary ny fitehirizana ny hafanana.
Ny trano dia heverina ho fitaovana lehibe, ary fitaovana fananganana PC-GRC maoderina no singa amin'ity fitaovana ity. Ny kalitaon'ireo faritra ireo dia azo antoka amin'ny alàlan'ny famokarana indostria hentitra, ary ny trano mivory dia afaka mahafeno ny fepetra ilaina.
4) ny fivoriambe fanorenana
Koa satria ny maha-zava-dehibe ny fananganana trano PC-GRC dia mihena ampahefany raha oharina amin'ny an'ny tranobe nentin-drazana, dia nohamoraina ny fototra. Aorian'ny famoahana ireo singa vita amin'ny prefabricated amin'ny orinasa, dia manangona azy ireo ireo mpiasa ao amin'ilay toerana araka ny sary. Ny fandehanana mando lava be toy ny fotaka, ny plaster ary ny rindrina fananganana dia tsy hiseho intsony eo amin'ilay tranokala. Ny fananganana fivoriambe PC-GRC dia manana tombony manaraka ireto:
1. Ny fandrosoana haingana dia azo omena ao anatin'ny fotoana fohy;
2. Mihena ny asan'ny mpiasa, ary mety sy milamina ny fampandehanana entana.
3. Ny fomba fiasa tsirairay dia afaka manamarina ny marina toy ny fametrahana ny fitaovana mba hiantohana ny kalitao;
4. Ny tranoben'ny fananganana dia misy tabataba malemy, kely kokoa ny fitaovana ary ny fako sy ny fako tsy misy fako, izay mahasoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana;
5. Mihena ny vidin'ny fananganana.